Izixhobo eziNtengiso zoMxholo ezingama-25 | Martech Zone
Izixhobo eziNtengiso zoMxholo ezingama-25
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 27, 2013 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Douglas Karr
Sisanda kwabelana Izixhobo eziNtengiso zeNtlalo ezingama-25 isuka e Ingqungquthela yamaQhinga amajelo eendaba ka-2013. Olu ayilo luhlu lubanzi, ezinye zezixhobo onokuzisebenzisa ukongeza isicwangciso sokuthengisa somxholo, kubandakanya imizekelo yokuma kwezixhobo ezintlanu kwiindidi ezintlanu zentengiso:
Ikhefu - Ezi zixhobo zinceda kwinkqubo yokufumanisa kunye nokuqokelela uluhlu lomxholo wewebhu onxulumene nesihloko esithile, emva koko ubonakalise kwifomathi enentsingiselo kunye nokulula ngokulula. Izixhobo: uluhlu.ly, Qinisa, ICurata, Khulisa kunye ne-Echo.
Indalo - Ezi zixhobo ziluncedo kakhulu ekuncedeni ukuba ubenombono womxholo wedijithali ngaphandle kokuya kubayili. Izixhobo: Umbono woLwazi, Lingospot, Visual.ly, Prezi.
Ukufumana ababhali bomxholo -Ukuze wenze umxholo omkhulu wohlobo lwakho, kuya kufuneka ubenomntu owenza lo msebenzi. Ezi zixhobo zikunceda ufumane ababhali kunye nabayili yoyilo ukwenza yonke imixholo emikhulu onayo engqondweni. Izixhobo: Okushicilelweyo, Ngomonde, Igama eligqithisiweyo, zerys kwaye Umbhali UkuFikelela.
Ukukhuthaza umxholo kunye nokuhanjiswa -Ukuba unomxholo omkhulu akonelanga ukuba awusasazwanga kububanzi okanye ekujoliswe kubo kubaphulaphuli. Ezi zixhobo zinceda ekuqinisekiseni ukuba umxholo wakho uyabonwa kwaye ucofiwe. Izixhobo: Bomgcini, Outbrain, Umxholo BLVD, ubunzima kwaye OneSpot.
Marketing kubahlalutyi kunye nokulandelela Nje ukuba umxholo usasazwe kumaqonga, sebenzisa ezi zixhobo ukulandelela ukubandakanyeka kunye nokuhlalutya ukusebenza. Izixhobo: Indawo yeWebhu, Umthetho-On, UMarketo, Genius, Uxolo.
tags: Ingqungquthela yamaQhinga amajelo eendaba ka-2013Umthetho-OnbufferUmxholo BLVDizixhobo zokuthengisa umxholoNgomondecurataEchoingqondoUGenisubunzimaikhutshweUmbono woLwaziLingospotuluhlu.lyKhulisauphawuOneSpotukukhuphauxolelopreziOkushicilelweyoigamaQinisangamehlo.lywndebguUmbhali UkuFikelelazerys
Iingcebiso ezili-10 ze-SEO yokubhala ngokuBhala
Indima yeDijithali yeMidiya kwiNtengiso
Jan 2, 2014 kwi-10: 20 AM
Molo Douglas. I-infographics enomdla kakhulu kwintengiso yomxholo. Enkosi ngoluhlu lwezixhobo, bendidinga uluhlu lwesixhobo sokulandela umkhondo kunye nohlalutyo. Enkosi ngaloo nto